ဘရာဟင်တကီယိုလာ ကိုမြင်တွေ့ ကြတဲ့ သူတိုင်းပထမဦးဆုံးသတိထားမိကြတာကတော့ သူဆန္ဒရှိသလို
ထင်ပေါ်ကျော်ကြားစေမည့် ခြေထောက်ကြီးမဟုတ်ပဲ သူ့ ရဲ့ မိုးထိုးနေတဲ့ အရပ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်...
သူဟာ ၂၄၆ စင်တီမီတာ ( ၈.၀၇ ပေ ) ရှည်ပါတယ်...
ပဲရစ် မြို့ လည်ကောင်မှာသူလျှောက်လည်တော့ လူတွေက တစ်အံ့ တစ်သြဖြစ်ကာ ၀ိုင်းအုံကြည့် ကြ၊ ဓါတ်
ပုံတွေရိုက်ကြနဲ့ ကမ္ဘာ့ အရပ်အရှည်ဆုံးလူသားများလားလို့ သူ့ ကိုမေးမြန်းကြပါတယ်...
ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို တစ်ပေကျော် ကြီးမားထွားကျိူင်းလှတာမို့ ကမ္ဘာ့ ခြေထောက်အကြီးဆုံးဘွဲ့ ရတာ
Brahim Takioullah has record-breaking feet - his left measures 38.1cm in length and his right, 38.8cm
သို့ သော်လည်း သူဟာကမ္ဘာ့ အရပ်အရှည်ဆုံးမဟုတ်ပေမယ့် ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးခြေထောက်ပိုင်ရှင် စံချိန်
ကမ္ဘာ့ ထူးဆန်းမှတ်တမ်း အဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်သူတွေဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ ကြပြီး သူ
ကိုယ်တိုင်ကမ္ဘာ့ စံချိန်ရှင်ဖြစ်ပါ့ မလားလို့ သံသယရှိနေခဲ့ တဲ့ ၃၈.၁ စင်တီမီတာ ( ၁.၀၄ ပေ ) ရှိတဲ့ သူ့ 
ရဲ့ ဘယ်ဖက်ခြေဖ၀ါး နဲ့ ၃၈.၈ စင်တီမီတာ ( ၁.၂၇ ပေ ) ရှိတဲ့ သူ့ ရဲ့ ညာဖက်ခြေဖ၀ါးကြီးတို့ ကိုတိုင်းတာ
ပြီး ( ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးခြေထောက်အဖြစ် ) စံချိန်ချိူးခဲ့ ကြောင်းအတည်ပြုပေးခဲ့ ပါတယ်...
တကီယိုလာတစ်ယောက် ပဲရစ်မြို့ ဆင်ခြေဖုံးမှာ သူ့ ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် အတူ နေထိုင်လျှက်ရှိသည့် အခန်း
ငယ်ကလေးတွင် ကိုယ်ကိုမတ်မတ်ပင်ဖြောင့် အောင်ထားပြီးရပ်လို့ မရရှာပါ... ( အခန်းအမြင့် ထက်သူ့ အ
ဘူတာရုံသွားဖို့ တက္ကစီစီးလျှင်လည်းအခက်အခဲတွေ့ ရသလို၊ သွားလေရာလူတွေသူ့ ကို ဂရုမစိုက်ပဲနှင့် 
လည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် မသွားနိုင်ရှာပါဘူး...
ဒါပေမယ့် လည်း သူ့ ရဲ့ ဘ၀ပေးအခြေအနေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့ သူဟာ ထူးထူးခြားခြားပဲ ဟာသဥာဏ်
ဖောက်ကာ ပျော်ပျော်နေတတ်တာမို့ အမြဲပင်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဖြင့် ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံလေ့ ရှိပြီး ခွဲစိတ်ကုသခြင်း
ဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်လိမ့် မည်ဟု သူမျှော်လင့် ယုံကြည်သည့် သူ့ ရဲ့ ဆေးပညာဆိုင်ရာအဖြစ်ဆန်း ( ခန္ဓာ
ကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ ထူးခြားစွာမရပ်မနား ကြီးထွားလာနေသည့် အဖြစ်ထူး ) အကြောင်းကို မေးမြန်းလာ
သူများအား ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ စွာဖြေကြားပေးနေတတ်ခဲ့ ပါတယ်...
တကီယိုလာ ဟာမော်ရိုကိုနိုင်ငံမှ ဖြစ်ပြီး ရွာကလေးတစ်ရွာမှာ နေထိုင်ကြီးပြင်းလာခဲ့ ပြီး ခန္ဓာကိုယ်၊ အရပ်
လျှင်မြန်စွာ ကြီးထွားမြင့် မားလာတာဖြစ်ပါတယ်...
သူဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က တစ်နှစ်အတွင်း သုံးပေကျော် ( တစ်မီတာ ) အထိအရပ်ရှည်လာခဲ့ ပါတယ်..
ယခုအသက် ၂၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သူ့ ကို အသက် ၁၈ နှစ်အထိ ယခုကဲ့ သို့ ထူးထူးခြားခြားကြီးထွားလာနေခဲ့ 
မှုအပေါ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးဖို့ မည်သူမျှ စိတ်မကူးခဲ့ ကြပါဘူး...
" ကျွန်တော့် ရဲ့ မတရားကြီးထွားမြင့် မားလာမှုကို ကျောင်းမှ ဆရာဝန်ကသတိထားမိခဲ့ ပြီး သွေးစစ်ဖို့ ပြော
ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...အဲဒါကြောင့် စစ်ဆေးကြည့် လိုက်တော့ ကျွန်တော့် မှာ အလွန်ဖြစ်တောင့် ဖြစ်ခဲဖြစ်တဲ့ 
အခရိုမီဂလီ လို့ ခေါ်တဲ့ ရောဂါဆန်း (ခြေ၊လက်၊မျက်နှာစသည့် ခန္ဓကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ မတန်တစ်ဆ
ကြီးမားနေမှု) ဖြစ်နေကြောင်းစမ်းသပ်တွေ့ ရှိခဲ့ ကြပါတယ်..." လို့ သူက အေအက်ဖ်ပီ သတင်းဌာနကိုပြော
အဆိုပါရောဂါဆန်းဟာ ဦးနှောက်အတွင်းရှိ ပီကျူထရီဂလင်း ပုံမမှန်ဖောက်ပြန်ကာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအ
အဆိုပါဦးနှောက်အတွင်းအကြိတ်ဂလင်း ကြောင့် အရွယ်အစားကြီးမားစေခြင်းအပြင် တစ်ခြားသော ရောဂါ
ပြဿနများကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တာမို့တကီယိုလာ အားခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရန် အကြံပေးထားပါတယ်...
The first thing that people notice about Brahim Takioullah is not his feet - which he hopes will make him famous - but his enormous height. He stands more than 246cm tall.
He's not, not quite, but he does have the biggest pair of feet on the planet - and that's official.
Judges from Guinness World Records came to France to measure him and confirmed his suspicion that he had record-breaking feet - his left measuring 38.1cm) in length and his right, 38.8cm.
Takioullah is from Morocco, and grew up inasmall village - grew up fast. In one year in his teens he put on more than three feet (one metre) inaspurt.
Posted by peter kyaw | at 9:14 AM |
ကျားကြီးလို့ ခြေရာကြီးတယ် ဆိုတာ ဒီမောင်က သက်သေပဲ ပေလား။
ဪဒွတ်ခ ရှည်တဲ့လူကျတော့ တိုချင်တယ်။ တားတို့များကျတော့ရှည်ချင်တယ်။ အရပ်ကိုပြောတာနော်။ :P